Lille 1-5 Paris Saint-Germain: Messi Oo Soo Afjaray Abaarta Ka Heesatay Dhanka Goolasha
HomeWararka CiyaarahaLille 1-5 Paris Saint-Germain: Messi oo soo Afjaray abaarta ka heesatay dhanka Goolasha
February 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka France 0
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee Ligue 1 tan iyo bishii November iyadoo Paris Saint-Germain ay 5-1 ku garaacday kooxda heysata horyaalka Lille ciyaar ka dhacday Stade Pierre Mauroy.
Kooxda PSG ayaa sii dheereesatay hogaanka horyaalka iyadoo 13 Dhibcood ku qabatay Hogaanka marka loo eego guusheeda Caawa.
Danilo Pereira ayaa goolashada u daah-furay PSG Daqiiqadii 10aad waxana Goolka laaad ku daray Presnel Kimpembe Daqiiqadii 32aad goolkaasi uu ka caawiyay Lionel Messi kaasi oo 6 Daqiiqo kadib dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay ee Horyaalka tan iyo bishii Novemver.
PSG oo kulankan isfahan xoogan ka dhaxeeyay ayaa qeybta labaad halkeeda ka sii waday goolashada Danilo Pereira ayaana Goolki 4aad dhaliyay Daqiiqadii 51aad halka Kylian Mbappé uu soo qatimay goolka 5aad ahaana kii ugu danbeeyay ee ciyaarta Daqiiqadii 67aad.
Kooxda Lille ayaa gool la timid qeybta hore lakin kuma filnaan in ciyaarta ay wax ka badasho.
PSG ayaa ku wajaheysa Rennes horyaalka Ligue 1 jimcaha, ka hor inta aysan martigelin Madrid lugta hore ee kulanka weyn ee Yurub Talaadada soo socota.
Lille oo ciyaareysa dhankeeda Champions League, ayaa ​​jimcaha Ligue 1 martigelineysa Metz, ka hor inta aysan u safrin Chelsea.